Lahatsoratra voalohany amin'ny taona | Avy amin'ny Linux
diazepan | | Fitsinjarana, GNU / Linux, About us
Azonao atao ny mahita fa ny lahatsoratro momba ny CUTI dia napetraka tamin'ny fotoana mety satria tsy nisy lahatsoratra vaovao avy eo. Androany aho hanoratra vaovao roa samihafa:
1) Laharana faharoa (ny laharana fahatelo) an'ny HDMagazine
Ity fanontana vaovao ity dia isaina ho zava-dehibe tafatafa iray nataon'i Eugenia Bahit niaraka tamin'i Richard Stallman, ankoatry ny fananana ireto manaraka ireto:
1. Fisorohana ny fanafihana mahery vaika sy ny olona eo afovoany
2. Famerenana: tadidiko foana izy ireo rehefa tsy eo izy ireo!
4. NoSQL Manokana: Fampidirana ireo serivisy ho an'ny NoSQL sy rahona
5. NoSQL manokana: firafitra anatiny, kaody ary toe-javatra.
6. Scratch: Alao sary an-tsaina, fandaharana, zarao.
7. Torolàlana momba ny fiarovana ny Internet Web PHP
8. lamina sy famolavolana anti-lamina Inona no ilana azy ireo?
9. Fanandramana amin'ny matplotlib sy "yuyos" hafa
10. MVC Manual: (2) Fomba fijery sy modely mavitrika
11. Mandehana GNU / Linux miaraka amin'ny Arch Linux: Fizarana II
12. Famakafakana ireo hazo fidirana Apache
2) Ny laharan'ny Distrowatch manomboka amin'ny 2012
Efa fantatsika fa tsy laharana azo itokisana izy io, fa raisina ho toy ny referansa mitovy amin'ny zavatra sasany.
Mint dia mahazo aina hatrany amin'ny laharana voalohany amin'ny taona faharoa misesy, Mageia dia mitifitra ary maka ny toerana faharoa avy amin'ny Ubuntu (izay latsaka amin'ny fahatelo), mamita ny 1 ambony: Fedora, OpenSuse, Debian, Arch, PCLinuxOS, CentOS ary Puppy. Snowlinux, Pear, SolusOS ary ROSA dia aseho ho voalohany voalohany (10 amin'ny 4 voalohany)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Lahatsoratra voalohany amin'ny taona
Tena tsara, laharana fahatelo amin'ny hackers sy Developers, ary ny fametahana areti-maso… mbola tsy haiko, tsy hitako ny fomba ahazoan'i Mageia toerana faharoa. Na ilay anarana aza tsy mandeha.
Ary eo amin'ny laharana fahafito i Arch
Saingy, hoy ny tonian-dahatsoratra, tsy dia azo atokisana izany.
Tsara ho an'ny HD M. Mamaky ...
Mampalahelo fa misavoritaka amin'i Arch aho fa hitako: Netrunner; ny ho avy Kubuntu !!!
Mageia !!! uuuuu afaka nanoratra tsara aho.
Tratry ny taona !!!!!!!
Misaotra ny lahatsoratra voalohany, mampiasa ny Mint KDE aho satria ny zavatra rehetra nanandramako azy dia ny tsotra indrindra sy "malleable", na dia te-hiala amin'ny Pear na ROSA aza aho, tsy manadino ny Fuduntu izay mety tsara ho an'ny netbooks, dia nanandrana izany tamin'ny maro aho ary mahatalanjona ny valiny.
Te-hanao ny fandrafetana ny taona aho mba hamelako distro azo antoka sy mora tohanana, te-hanontany anao aho tsy misy fientanam-po na fanatisme mba hanomezana distro ho an'ny solosaina finday Samsung RV408 misy RAM 6 GB izay ampiasaiko hijerena, hijerena sarimihetsika, hihainoana mozika ary hanoratako asa , Manaova hevitra sy PDF ary ny famerenana sary indray ny sary.
Ary ho anao rehetra, iriko ianao mba ho afaka hahatakatra ny nofinao amin'ny 2013.
Ubuntu 12.04.1, ny ho avy Fedora 18 sy ny Arch no omeko torohevitra.
Arch dia mahazo aina indray amin'ny fampiasana, fitantanana ary hianarana, ny mora indrindra amin'ny distros rehetra ankehitriny, na izany aza ny fananana vondrom-piarahamonina somary kely-ampitahaina amin'ireo distros toa an'i Ubuntu, Fedora, Gentoo, Debian na koa openSUSE- no mahatonga azy io Imbetsaka mba hahatratrarana ny fiasa tianao no mila mianatra manao azy samirery ianao, izay tsy olana raha manana fotoana malalaka be ianao (tombony kokoa noho izy io satria manery anao hianatra hery!). Na izany aza, ary mifanohitra amin'ireo vondrom-piarahamonina goavambe (tsy hanome anarana aho!) Na dia kely aza i Arch, dia vondron'olona mahalala zavatra betsaka (LOT), tena mitovy amin'ny fomban'ny vondrom-piarahamonina Gentoo, Debian na Slack.
Raha tianao ny KDE SC ary manam-potoana handaminana sy hanatsara ny masininao ianao, apetraho ny Arch, tsy hanenenanao izany, rindrambaiko tena tsara sy manara-penitra ao anaty distro maoderina, haingana (tena haingana), maoderina ary be tara-pahazavana. Raha mitady zavatra am-bifotsy ianao izay ahombiazan'ny zava-drehetra hatramin'ny voalohany dia mieritreritra aho fa ny Linux Mint KDE SC dia safidy tena tsara (ho ahy tsara kokoa noho ny Kubuntu mihitsy) ary ho azonao antoka ny mifanentana tanteraka amin'ny Ubuntu, tsy vitsy ny angona.
Ny olana tokana amin'ny Linux Mint na ny * buntu hafa dia ny olan'ny PPAs: ny fananana rindrambaiko ankehitriny ao amin'ny * buntu dia manampatra PPA foana ianao satria ny distro dia manavao ny kinova amin'ireo programa napetraka isaky ny 6 volana (efa tsy mandeha intsony fa amin'ny sehatra toa an'i Windows na MacOS na Arch Linux mihitsy dia havaozina tsy tapaka raha vantany vao manambara ireo mpamorona fa miovaova ny kinova).
Midika izany fa mety manana fifanolanana ianao hanavaozana eo anelanelan'ny kinova ary mila mandinika hatrany ny lisitry ny PPA ianao aorian'ny fanavaozana ny kinova iray amin'ny rafitra mankany amin'ny iray hafa satria repository maro no tavela eny an-dàlana na handany fotoana miovaova hanavaozana amin'ny kinova vaovao amin'ny buntu.
Miarahaba anao ary «Tratry ny taona» 😀
Mikasika ny Arch, raha tena ahazoana aina, mampiasa pacman yaourt Aur, izay hamerina ahy tsy mieritreritra Arch. Ny fanavaozana tsy tapaka na ny lohalaharana eo amin'ny andohalambo foana no antony voalohany tokony hifindrana amin'ny debian.
Vao avy nampiasa an'i Debian aho ary vatolampy 😀
Distro mitovy aminy ary aleoko Sabayon, izy no lohalaharana, tsy be arko fa hitako milamina kokoa sy mora kokoa izy io.
Mifanindran-dàlana, omaly dia nanao marathon Sabayon 10 KDE SC aho!
.ny tontolo iainana dia vita tsara ary miasa amin'ny fomba tonga lafatra - misy ihany koa ny fikajiana estetika isaky ny mpampiasa toy ny fanalana ny antialiasing sns.
.Rigo dia mahagaga, iriko fa misy zavatra mitovy amin'ny sisa amin'ny tontolon'ny GNU / Linux 😀 - Tena tiako, tiako io, io ihany no fijanonana ilaina hijanonana farany amin'ny vaovaom-piarahamonina, hanavao ny rafitrao ary hametraka na hanala programa . Mahafinaritra, mahazo aina ary tena mandaitra izy io.
Ny rafitry ny bara rafitra dia tafiditra tsara ary manatanteraka tsara ny asany.
.KDE SC mandeha tsara: mamaly izy ary tsy mahatsiaro mavesatra. Ho fampitahana tsara dia tokony hizaha toetra azy amin'ny tena HW ianao fa tsy milina. virtoaly.
Amin'ny maha nerd ahy, ny tena tiako indrindra momba an'i Sabayon dia ny fijerena manokana ny kernel sy ireo antsipirian'ny fiarovana hafa voatanisa ao amin'ny pejy fisintomana; ireto toetra ireto ihany (ary ny hoe 100% Gentoo) dia efa mirona amiko hisafidy an'i Sabayon amin'ny sisa amin'ny disto.
.Gentoo dia ovy !!!! Azafady, ny rafitra fanavaozana an'i Gentoo dia mety tsy hooooooo, fa soooooo miadana be !!! Raha vantany vao nampidina ny fanavaozana 500mbs (KDE SC 4.9 ka hatramin'ny 4.9.4), naharitra adiny iray mahery vao nanavao ny rafitra farany.
.Gentoo dia malefaka be satria mamela ny zava-drehetra ho an'ny mpampiasa azy hanao izay tiany amin'ny rafitr'izy ireo… fa ny Portage kosa TOO miadana, na dia havaozina aza ireo fitaratra. Ho fanampin'izay, manasarotra ny tsotra ny Gentoo ary lasa rafitra manahirana tanteraka raha ny amin'ny fitantanana isan'andro. Ny fananganana lisitr'ireo hoditra, rakitra havaozina, sns., Dia sarotra sy tsy misy dikany.
Nandritra ny fanavaozana ny rafitra vao napetraka dia nisy lesoka marobe niseho: http://imgur.com/a/2ESs2
Azonao atao ny mahita fa nitandrina tsara ny Sabayon 10 izy ireo ary efa nivoatra tsara nefa:
Ny fahasarotana ao anaty ao amin'ny Gentoo dia tsy manampy na inona na inona amin'ny rafitra iray toa an'i Sabayon izay ahitàna ny fonosana binary sy ny fanangonana fonosana avy hatrany am-boalohany izay manararaotra ny mampiavaka an'i Gentoo dia mety hanimba ny rafitra iray manontolo.
.na dia ny valin'ny rafitra custom Gentoo aza dia mety ho rafitra haingana (noho izany ny anarana hoe, Gentoo no penguin haingana indrindra) ny fametrahana sy fikojakojana ny fijaliana
Ary farany, momba ny "famadihana" nataonao tamin'i Debian:
Marina fa indraindray ny hafainganam-pandehan'ny fanavaozana ny rafitra dia mety ho mahasosotra - ary na dia manelingelina aza raha ny hany tadiavintsika dia rafitra miasa tsara hanaovana asa iray, na izany aza ny fahatsorany anatiny no mahatonga ahy tsy hahafahako mandao azy, ankoatr'izay, raha vantany vao mihazakazaka ny rafitra ianao raha afaka manohy mampiasa azy io raha mbola tadiavinao nefa tsy manavao azy, noho izany dia hanana fihetsika mitovy tanteraka amin'ny rafitra tsy RR mitovy aminao =)
Ao an-trano aho dia manana mpizara tranonkala sy pirinty izay mampiasa Ubuntu Server 12.10 (izay napetraka mazava tsara mba tsy hikajiana an'i Debian / Ubuntu) ary na dia mora aza ny tsy manahy momba azy io ankoatry ny fametrahana tsimoramora ny fanavaozana ny fiarovana isaky ny mandeha Tsy maintsy miatrika ny rafitra aho fa loza efa ho avy (nolovaina tamin'i Debian avokoa):
Fa maninona no ny lahatahiry nametrahana ny fisie Apache2 dia nantsoina hoe apache2 (/ etc / apache2) raha ny anarana nomena azy hatrany ambony dia / etc / httpd (anarana hajain'ny Arch)?
Ary koa, ny rafitra izay manaparitaka ny fisie http.conf sy ny fampiharana ny fanaovana symlinks ho an'ny tranokala mihetsika na ny fijanonana dia hafahafa, iza no nahita ny manam-pahaizana toy izany?
Sa ohatra BIND9, izay ao Debian dia mizara subdirectories telo ny fisie configur fa tsy ny rehetra ao anaty / sns novolavolain'ny devs?
Miverina, mitovy tanteraka amin'ny ataon'izy ireo amin'ny nginx !!!
Tsy mahagaga ahy raha any Debian dia maharitra ela ny fanavaozana ny tahiry raha toa ka voahaja amin'ny fomba toy izany ny rindrambaiko tsirairay omeny!
Tsy lazaina intsony ny fitsapana lalina tokony hatao mba hahitana raha miasa tsara izy ireo aorian'izay!
Ilay mpizara hafa ananako dia ilay hozatra: ampiasaiko ho NAS izy io, handrafetana ary ambonin'izany rehetra izany hampandeha ireo milina virtoaly azoko amin'ny fampiasana X2Go (safidy tsara ho an'ny FreeNX na dia tsy mifanaraka amin'ny sampana NX-3.5 aza) mandra-panandrako phpvirtualbox.
Izany dia mihazakazaka Arch (inona koa!) Ary na dia ampiasaiko aza izy io ho toy ny toeram-pitsapana amin'ny zava-drehetra, dia tsy nandrehitra ahy velively. Satria kamo aho, kamo be, toy ny sysadmins (tsara, tokony holazaiko!?) Ary satria tsy mifandray mivantana amin'ny Internet ny solosaina dia manavao azy io aho amin'ny fotoana fohy ary ny famakiana ny vaovao momba ireo fanavaozana dia ampy vao haingana. Ary farany, tsy manavao ireo rindranasa izay mandeha tsara mihitsy aho na dia avoaka aza ny kinova vaovao, raha mandeha izany, maninona no miova? Hafa ihany raha toa ka mitondra fiasa mahaliana ahy ilay kinova vaovao amin'ireto programa ireto, raha izany dia andramako amin'ny VM izy ireo ary raha miasa tsara izy ireo dia arosoko ao amin'ilay rafitra na dia miandry volana vitsivitsy aza aho hahita ny valiny avy amin'ny fiarahamonina ary hanavotra ny tenako. Ny fitsapana azy ireo irery.
Miarahaba ary manana - manaova ny olona rehetra! - 2013 tena tsara!
Nidina aho araka ny tolo-kevitrareo mba hanandrana ny Arch ary niteraka fikorontananana ny fanombohana, mangataka amiko ny tenimiafiko sy ny zavatra hafa ... Ahoana no ahafahako manoro hevitra amin'ny olom-baovao avy amin'ny W $ distro izay tsy azoko apetraka akory? Ny tadiaviko dia ny hisarika ny olona ho amin'ny Linux, tsy hoe manohy mahita azy ireo ho zavatra sarotra sy sarotra ampiasaina izy ireo. Misaotra tamin'ny fanazavana sy fikasana tsara nataonao.
Miarahaba anao ary tratry ny taona vaovao 😀
Sendra nametraka sabayon X tamin'ny solosainan'ny ray aman-dreniko aho (esory ny win7).
Napetraka tao anatin'ny 10 min, novaina tao anaty 30 min (fonosana 487), hitako daholo ny hw. Distro 10 io
"Somary miadana ny" Gentoo "Eny, fa ny fitoniany no mandahatra izany. Izay no lazaiko 😀
Hafainganam-pandeha, gentoo dia mahatalanjona tanteraka.
Ny fanaovana palitao nohaingoina ary hampifanarahana amin'ny filanao izany.
Hahaha nivadika tamin'i Debian, mety izany, efa 3 taona aho no nampiasa arko ary nandinika azy io ho distro linux tsara indrindra.
Ankehitriny rehefa tapitra ny fialantsasatra (manana 2 herinandro sisa aho: O) mitady distro aho, izay tsy hiadiako amin'ny rafitra na manana olana noho ny fametrahana azy. (Fa manana Windows aho hahahahaha mananihany aho.)
Amin'ny alàlan'ny andohalambo dia nahazo fanavaozam-baovao 2 na 4 aho izay nametrahako ny rafitra, ankehitriny aho dia nanandrana nametraka andohalambo ary ho an'ny carte de vidéo dia tsy mamela ahy. (ATI io, ny fampihorohoroan'ny linux rehetra). Ary tena, leo ahy i Arch.
Na dia eo aza ny zava-tsarotra misy eo aminy, dia mirindra tsara amin'ny solosainako i debian. Na dia mieritreritra ny hametraka gentoo aza aho 😀
Izaho koa dia mizaha toetra amin'ny Slackware, saingy tsy resy lahatra tanteraka aho.
Hatreto dia tena nahafaly ahy i debian sy sabayon.
Na dia misy aza ny teny eo amin'ny Archers.
«Vantany vao tafapetraka dia miverina foana ianao» ary efa nitranga tamiko imbetsaka io 😀
Misaotra ... tsy tiako ny Ubuntu, aleoko i Kubuntu, manasarotra ahy amin'ny partitions sy .rpm ary Arch i Fedora rehefa manomboka ny fangatahana dia mangataka tenimiafiko sy zavatra hafa izay amin'ny maha-olom-baovao ahy izay tsy zakako, inona aho Mitady aho dia distro izay azoko apetraka sy ampiasaiko mora foana ary amporisihiko koa amin'ny ohatra (izany hoe ny fampisehoana azy) amin'ireo izay te hisaraka amin'i W $.
Ahhh ah, tsy fantatro fa nanao ny fanovana ianao ary mitaona mpanaraka vaovao ho an'ny lafiny Bright !! (ny lafiny maizina dia Windows, fantatrao!).
Miombon-kevitra tanteraka aminao amin'izay, izaho manokana dia nanomboka tamin'ny Ubuntu ary satria tiako ny teknolojia tamin'ny fotoana nifindrako ho Arch. Raha ny marina, rehefa kelikely, avy any Ubuntu (7.04 ka hatramin'ny 9.04, heveriko) dia te hifindra monina tany amin'ny KDE aho ary niandry ny kinova 9.10 nanomboka teo tamin'ny teo aloha dia tsy nandeha tsara.
Kubuntu 9.10 dia voaporofo fa mampidi-doza toy ny teo aloha rehetra ary taorian'ny tapa-bolana dia nanomboka nanamarina tsara ireo distros DistroWatch.com aho. Rehefa nahita an'i Arch aho (sendrasendra satria tsy tao anaty lisitra tamin'izany fotoana izany, heveriko) dia raiki-pitia tamin'ny KISS konsep'ny distro aho ary nanapa-kevitra ny hametraka azy io mba hitsapana ny KDE satria izay notadiaviko tamin'ny ankapobeny dia distro izay hitondra tsara ny KDE.
Tamin'io fotoana io i Arch dia nanao ny fanovana avy amin'ny KDEmod (izay lasa Chakra taty aoriana) ho lasa feno ho an'ny KDE ka rehefa nametraka azy aho ary nanamarina ny fahombiazan'ny KDE raha ampitahaina amin'ireo sisin-dàlana rehetra izay notsapaiko dia fantatro fa misy zavatra manokana.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nahafantatra ny rafitra lalina aho ary niaraka tamin'izay dia nanomboka niasa tamin'ny rafitra niaraka tamin'ny distro hafa aho ary nahatsapa ny fahatsoran'ny Arch.
Amin'ny anao manokana, heveriko fa misy distro roa lehibe hanandramanao ary mifanaraka amin'ny toetra tadiavinao:
1. avelao handeha ny zavatra rehetra !!
2. ataovy mora ny mametraka azy ireo
3. ataovy mora ampiasaina izy ireo
4. izay mahasarika maso ary mahasarika mpihaino vaovao.
fototra OS sy Linux Mint, samy miorina amin'ny Ubuntu sy binary mifanaraka, izay midika fa ny .DEBs voaomana ho an'ny Ubuntu dia azo ampiasaina tsy misy olana amin'ireo distros ireo.
Raha ny OS fototra dia miorina amin'ny Ubutnu 12.04 LTS izy io ary manana fanohanana mandritra ny dimy taona. Ny distro dia manaraka ny foto-kevitr'i Apple miaraka amin'ny MacOS: manome rindrambaiko matanjaka nefa misy ny safidy mety sy ilaina izay ampiasain'ny ankamaroan'ny mpampiasa isan'andro. Amin'izany fomba izany, ny distro dia manana ny rindranasa misy azy izay toa sooo fa tena tsara, ary satria tsy manana safidy "sempotra" ny isan'ny fampiharana dia hitan'ny mpampiasa farany fa azo ampiasaina tokoa ny distro satria tsy "very" ao amin'ilay rafitra izy ireo. Nametraka an'ity distro ity ho an'ny rahavaviko aho. tao amin'ny kahieny dia nanana Linux Mint 13 Kanelina izy ary nilaza «mahafatifaty !!! mandehana barbariana! tsy misy ifandraisany amin'ilay napetrako teo aloha, dia toa prehistorika eo anilan'io, misaotra !!! »
Linux Mint: Milaza ny resadresaka fa ny Linux Mint dia "vita tsara Ubuntu" na dia ny tena zava-misy aza dia na dia mitombo hatrany aza ny Ubuntu ary mivoatra tanteraka ao amin'ny Mint dia natokana hanamafisana ny Ubuntu izy ireo ary hanome traikefa mahazatra an'ny mpanjifa.
Betsaka ny kinova Linux Mint azonao apetraka arakaraka ny fahaizan'ny HW an'ny masinin'ilay mpampiasa, nefa tsy isalasalana fa ny tena mahavariana dia ny Kanelina (mifototra amin'ny GNOME 3 sy amin'ny fampandrosoana mavitrika) ary ny KDE SC.
Indrindra ny kinova an'ny KDE SC an'ny Linux Mint, ankehitriny ho an'ny 4.9.4, izany hoe ny farany, dia tena tsara ary toa tena tsara, milamina tsara, tena voadio, raha ny marina dia tsara kokoa noho ny Kubuntu mihitsy ary amporisihiko amin'ny Kubuntu matoa ity distro farany ity dia toy ny tantaran'ny fantsom-pohy tsara: 20 foana ny taonany tsy hita. noho ny lanjany: zavatra P izay tsy hitanao ao amin'ny Linux Mint ary ankoatry ny fisehoana bibikely sasany dia mamaha azy ireo faran'izay haingana dia tsy miandry ny kinova manaraka izy ireo.
Raha misy zavatra izay isaorako an'i Kubuntu foana, dia ny nampahalala ahy ahy an'i Arch tamin'ny 9.10 taorian'ny nametrahako ahy tamin'ny kinova taloha rehetra. Raha nanao tsara i Kubuntu, mety ho Arch androany fa tena hanome torohevitra azy aho ...
Ahhhh eny, tsy fantatro fa efa ela ianao no tsy teto an'io. Amin'ny ankapobeny, ny zavatra asehoko an'ireo namako Windows dia ny Fedora KDE, ary indraindray izy ireo very hevitra, efa nataoko nifindra monina tanteraka ho 3 ny mpiara-miasa amiko XNUMX, maro no efa mitsapa. Mikasika ireo fahasarotana dia manome sosokevitra aho toy ny @msx Linux Mint, Elementary, sy ny hafa toa an'i SolusOS, hoy PCLinuxOS. Ny torohevitro dia hoe raha mahazo traikefa ianao, raha mila mianatra ianao rehefa ela ny ela, omeo tsiro i Archlinux dia voasarika aho.
@Ghermain, raha mandeha tsara dia ampiasao ny Kubuntu. Manoro hevitra anao aho hanaraka ireto torolalana momba an'io Samsung io:
Ho an'ireo asa isan'andro, azonao atao ny misafidy Ubuntu iray hafa na karazana hafa ao aminy izay misy codec audio sy hafa izay manamora ny asanao amin'ny solosainao;)!
Tena tsara fanahy aminao aho fa raha ny tsiriko sy ireo vao avy ao amin'ny W $ Ubuntu dia toa "fisaka" tokoa izy io fa tsy distro amin'ny KDE, izay tianay tokoa.
Manana lisitra Pear Linux (MAC sy tontolo iainana maivana) aho, Rosa (na dia tsy eken'ny admin aza izany indraindray; heveriko fa hariako) sy Linux Mint 14 KDE. Ao amin'ny "soak" Sabayon sy Chakra fa tsy tiako ireo partitions mini izay ataon'izy ireo amina programa sasany toa ny Firefox, LibreOffice, Thunderbird ary ireo hafa tsy maimaim-poana, "disk" be dia be tokoa izay toa ny programa dia toa mahatsiravina.
Manaitra ahy fa tsy ao anaty lisitra i Manjaro. Hatao izany satria mbola tena vaovao tokoa.
Misaotra tamin'ny magazine. Mamaky !! 🙂
Ary tratry ny taona !!
Manjaro dia 52 taona
Mbola midina ihany io, nefa manantena aho fa hiakatra izany. Mendrika izany izy. Nahavita asa lehibe nanatsarana ny fiasan'ny andohalambo izy ireo.
Tena ambany dia ambany amin'ny latabatra fanao isan-taona, fa amin'ny latabatra 6 volana dia ao amin'ny 24 ary amin'ny 3 volana ao amin'ny 17
Misaotra betsaka an'i Diazepan tamin'ny fampahalalana, mamaky tsara hanombohana ny taona.
mmm Raha mila mametraka laharam-pahamehana aho ...
Tiako ny Arch Linux-ko miaraka amin'ny XFCE, izao dia ao amin'ny fivarotana Apple aho
Miantsena faly amin'ny 2013.
Tsy isalasalana, Chakra u Sabayon;)!
PS: Misaotra tamin'ny Magazine!
Tratry ny taona vaovao daholo!
Manana azy ireo aho "milomano" fa tsy tiako ny fomba namoronana mini disk isaky ny fampiharana tsy maimaim-poana.
Ufff! 5 andro tsy mandefa na inona na inona. Nanjary nahafatifaty aho ...
Hehehe tsy raharahako koa. Lecturitis maranitra, tsy isalasalana fa ity blog ity dia manana fiankinan-doha amin'ny endrika na amin'ny lahatsoratra. Rehefa afaka kelikely dia mampiditra sary subliminaly mandritra ny enta-mavesatra izy ireo ary mamporisika antsika hiditra XD.
Fampahalalana tena tsara toy ny mahazatra sy hanombohana ny taona.
Te hilaza aminao izany aho, mitady distro KDE avela eo amin'ny kahie; nisy olona miasa be amin'ny siansa informatika nilaza tamiko fa aza mitady intsony Kubuntu, Mint, OpenSuse, Chakra, Mageia, Sabanyon, sns ... hametrahana Netrunner (http://www.netrunner-os.com/) satria io no fiakarana ho an'ny BlueSystems, ary nanakarama mpandrindra izy ireo hanokana fotoana manontolo handevozana azy.
Nitady info tamin'ny alàlan'ny google aho ary toa marina loatra ity zazalahy ity; noho izany dia nakariko 12.12 tamin'ny x64, nametraka azy aho ary gaga tamin'ny fomba fiasa sy haingana be, miaraka amin'ny fanjifana loharanom-pahalalana ambany, mahafantatra ny fitaovana enti-miasa rehetra izy, ary ny fampiharana ilaina ihany no apetrany (LibreOffice, Gimp, Divay, Skype, VLC , raha tsy hitonona vitsivitsy) ny ambiny apetranao amin'ny zavatra ilainao, ankoatry ny estetika tena voadio.
Ilaina ny manandrana azy ary araka ny mahazatra dia avelao izahay hahita ny hevitrao tena mitombina.
Ny fotoana farany nanamarihako ny NetRunner dia tsy inona izany fa ny Kubuntu nosasana tarehy sy ny fisafidianana ireo fonosana GTK tsy misy fangarony mba handrakofana ireo lahasa misy ny programa Qt, eny, hodgepodge baribariana; eny, nanaja ny distro rainy izy hatramin'ny fotoana nanafarany ny bibikely sy ny kilema rehetra !!
Tianao ve ny NetRunner mihoatra ny Linux Mint (na ny tetikasa roa tonta dia miara-miasa timotra)?
Tsara ny famerenana, misaotra amin'ny tendrony!
Eny, tiako kokoa noho i Mint sy i Kubuntu mihitsy izany, ary na dia miara-miasa amin'ny BlueSystem aza izy ireo, ny andiany 12.12 farany an'ny Netrunner dia be ranoka.
Amin'ny maha «apôstatika» ahy 🙂 amin'ity taona 2013 ity dia ny hisarihana ireo mpampiasa W $ ho any Linux, mamela azy ireo tsy hiteny intsony ity fizarana ity, amin'ny maha olom-baovao azy tsy azoko hoe inona izany (ary miala tsiny amin'ny tsy fahalalana aho) «fonosana GTK handrakofana ireo lahasa an'ny programa efa misy ao amin'ny Qt »fa ny zavatra ilaintsika amin'ny maha lahasa fototra azy dia mahatanteraka ny tanjony 100%.
Marina fa nanana lesoka izy ary tena tsy nitandrina nefa izao dia tena matotra ary zavatra hanakaramana olona ho an'io tetikasa io irery.
Ny 'toolkit' na 'boaty fanodinana' roa ampiasaina amin'ny lozisialy maimaim-poana dia ny GTK sy Qt.
Amin'ny maha boaty fampitaovana anay dia faritanay tsara fa: andiana fitaovana vita amin'ny tranomboky kaody, interface eo anelanelan'ny fandaharana sy ny rafitra fikirakirana, ny interface eo anelanelan'ny fandaharana sy ny tontolon'ny birao ampiasainay, sns. Samy GTK sy Qt dia mpamono C ++, izany hoe "fonosana" C ++; Midika izany fa ny toolkit tsirairay dia manana ny asany izay manamora ny fampiasana C ++ ary manakana ny mpandahatra programa tsy hanoratra andalana an'arivony fehezan-dalàna miverimberina hanatanterahana asa mitovy.
Ny GNOME (Unity, GNOME / Shell, kanelina, Xfce, Lxde, sns.) Dia mampiasa GTK sy KDE SC (Razor Qt sy ilay vaovao Be: Shell) mampiasa Qt. Amin'izany fomba izany, ny GTK dia manana andraikitra manokana izay mila sosona fanampiny mba hifanarahana amin'ny tontolo KDE ary hahafahan'ny tontolon'ny KDE "mahatakatra" izay baikon'ny GTK apetraka aminy, mitovy amin'ny fampiharana Qt ao amin'ny tontolo GTK .
Ankehitriny, mba hampiasaina amin'ny KDE SC ny rindranasa voasoratra ao amin'ny GTK (ary ny mifamadika amin'izany, ny fampiharana Qt amin'ny GNOME) dia ilaina ny mametraka sy mametraka ao anaty fitadidiana andian-tranokala izay ireo no mandika ny torolàlana omen'ireo rindranasa ireo amin'ny rafitra.
Koa satria ny KDE SC dia birao mifototra amin'ny Qt, ilaina ny mametraka tranomboky toy izany ho an'ny fampiharana GTK hiasa amin'ny birao voalaza + ireo famakiam-boky ilaina mba hisian'ny fitovizan'ny fahitana eo amin'izy ireo, izany dia ilaina ny fampiasana loharanom-pahalalana bebe kokoa (CPU) ary fahatsiarovana hampiharana rindran-damina amin'ny rafitra hafa - ok, amin'izao fotoana izao dia saika tsy olana amin'ny solosaina mampiasa processeur i3,5 na 7 ary miaraka amin'ny 4, 6, 8 ary hatramin'ny 16 gig ny fitadidiana toy ny fahita matetika, NA INDRINDRA ENY Olana amin'ny solosaina an-trano lafo vidy toa ny Compaq AIO vaovao satria raha ny tena izy dia manana processeur ATOM ireo masinina ireo ary tsy mihoatra ny 2GB RAM miaraka amina carte graphique tafiditra "ambany noho ny mendrika" noho izany ny rafitra mavesatra dia hisy akony amin'ny fahombiazan'ny fampiharana ankapobeny.
Mitandrema, amin'ny fampiasana omen'ny ankamaroan'ny mpampiasa ny masinin'izy ireo, dia ny fitetezana ny hitsin'ny Face $ ary manokatra tsindraindray mpamaky teny na fampiharana sary ary mihaino mozika, AIO miaraka amin'i Atom no tavela, ny olana dia rehefa mampiasa ny milina ankoatr'izay dia mila manavao ny rindrambaiko ianao na mampiasa rafitra maivana kokoa.
Raha miverina amin'ny fanontanianao aho, dia marina fa noho ny fotodrafitrasa KDE SC tenany, io dia biraon'ny birao mavesatra kokoa noho ny mifototra amin'ny GTK, ny fahasamihafana izay tsy azo tsinontsinoavina ankehitriny satria miaraka amin'ireo kinova Qt farany. nahavita nampifandanja ny zava-bitan'ny KDE SC tamin'ny an'ny GNOME - na dia marina aza fa ny KDE SC dia mbola mandany fahatsiarovana kely kokoa noho ny GNOME.
Io fahasamihafana lehibe io dia noho ny antony manosika ny fisian'ny birao roa tsirairay: GNOME, mpanaraka ny filozofia Apple ho an'ny MacOS, dia mitady hanome ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra amin'ireo safidy faran'izay vitsy azo atao. Manaraka ny fotopampianarana minimalista izy ireo fa arakaraky ny tsy tokony hofidin'ny mpampiasa na ampiany azy manokana, no mahomby kokoa amin'ny fampiasan'izy ireo ny rafitra. Resy lahatra izy ireo fa amin'ny fanomezana azy ireo safidy "tena ilain'izy ireo" (mariho ny fiteniko maneso) dia ho salama tsara ny mpampiasa, raha ny tena izy dia tsy mila zavatra bebe kokoa izy ireo ary mifanohitra amin'izany kosa ny fanomezana azy ireo safidy bebe kokoa hahatratrarana io asa io ihany counterproductive of the same Ny fomba filazan'ny olona "boky firy, izao tsy haiko izay ho entiko miaraka amiko!"
Ary misy antony matoa izy ireo.
Raha ny tena izy, ho an'ny mpampiasa antonony, amin'ireo izay manatrika dia marina fa arakaraka ny habetsaky ny safidy omenao azy ireo no vao mainka hanasarotanao azy ireo dia mahita ny solosaina ho zavatra majika, boaty mainty ary toy ny rajako izy ireo dia fantatr'izy ireo fa raha manery eto izy ireo dia misy izany zavatra izany ary manindry zareo misy tranga hafa toy izany. Ho an'ireo mpampiasa ireo, ny ankamaroan'ny mpampiasa farany, ny rafitra voafetra dia MIVOAKA.
Ho antsika sisa izay mahatsiaro tena voafetra amin'ny GNOME (na dia tiako manokana aza ny fahadiovana sy ny fampiharana azy) dia misy ny KDE SC izay samy hafa be ny toerany: «andao omena safidy betsaka araka izay tratra ny mpampiasa ary avelao izy hisafidy ny fomba te hampiasa ny lafiny rehetra amin'ny rafitra.
Amin'izany fomba izany ny fampiharana toa an'i Gwenview (ny sary, ny horonan-tsary ary ny mpijery an-tsarimihetsika an'ny KDE SC) dia ambony lavitra noho ny Eye of Gnome kely, toy ny hantsana misy eo anelanelan'ny Dolphin + Nepomuk + Strigi amin'i Nautilus na ny mpitantana sary hafa an'ny Antontan-taratasy efa misy - raha ny tena izy dia Dolphin no mpitantana rakitra maherifo matanjaka indrindra amin'ny sehatra rehetra.
Na eo aza io fahafaha-mavesatra omen'ny rafitra KDE SC io mba ahafahan'ny mpampiasa mandray azy amin'ny fomba fiasan'izy ireo manokana, ary ny habetsaky ny safidy omen'ny fampiharana tsirairay dia mahatonga azy io ho rafitra sarotra sy mavesatra kokoa noho ny GNOME, na dia, araka ny nolazaiko anao androany, ny Ny vesatry ny ohabolana KDE dia tsy misy ankehitriny (amin'ny rafitra maoderina, mazava ho azy) noho ny fanatsarana ny fitaovana Qt 4.8.
Ary farany, na dia voasakantsakan'ny ankapobeny aza ny tontolo iankinan'ny GNOME ary manery ny mpampiasa hianatra ny fampiasana azy ireo sy hampifanaraka azy ireo amin'ny lalan'ny asany, ny KDE SC dia manentana ny mpampiasa hahita ny fomba tsara indrindra hampiasana azy io sy hampifanaraka izany amin'ny zavatra ilainy, Izany no antony ahafahanao mahita birao an'arivony mihodina amin'ny KDE SC ary samy hafa daholo izy rehetra raha miaraka amin'ny birao Xfce na GNOME dia hitovy kokoa izy ireo.
Amin'ny tranga manokana, ny fitantanana sy ny fampiasana ny rafitra dia atao amin'ny alàlan'ny Yakuake sy tmux ka rehefa avy nandray zavatra sasany toy ny haben'ny endri-tsoratra, endritsoratra, antialiase ary antsipirian'ny tontonana dia mampiasa KDE SC traditional mahazatra aho.
Ny endri-javatra farany tiako asongadina momba ny KDE SC (amin'ireo an'arivony ananany) dia ny fifehezana tanteraka an'izay misy eo am-baravarankely: amin'ny fipihana tsara eo amin'ny zana-baravarankely dia hidiranao ireo menus ahafahanao mamaritra amin'ny biraonao varavarankely resahina na ny fampiharana iray manontolo, ny habeny tany am-boalohany, ny toerana misy ny efijery ary maodely am-polony hafa.
Ny KDE SC dia tena zava-mahatalanjona manome ny mpampiasa ny fahaizana manangana azy amin'izay tiany sy ilainy.
==== Vao avy nandinika ny Netrunner aho mba hamaranako ny hevitro ary tsapako fa nilaza hadalana be aho: Netrunner tsy mampifangaro GTK amin'ny Qt, mampiditra fampiharana mahazatra toa ny GIMP na Inkscape novolavolaina tao amin'ny GTK fa ny ankamaroan'ny fampiharana dia GTK , APOLOGIANA !!! ====
Fanamarihana 1: Mikasika ny hevitro: rehefa nampiasa Netrunner tena ambony aho dia toa nisy rindranasa GTK nisolo ny fampiharana Qt natvias saingy tsapako fa zavatra tsy misy dikany no ilazako satria ny rafi-dalao GTK no tena manoratra.
Fanamarihana 2: Netrunner dia manome kisary hidirana amin'ny Yakuake (tontonana izay mivelatra avy eo amin'ny farany ambony), hampiasana azy kokoa amin'ny fomba matotra aho dia manolotra ny hitsin-dàlana fitendry mahazatra (Alt + F12) na izay ahazoana aina kokoa ho anao araka ny hampiasa ny kitendry sy ny rafitra, raha ny ahy Super (diso antsoina hoe Windows) + Esc.
Fanamarihana 3: Taorian'ny namerenako ny menio fampiharana Kickoff ho an'ny menio tany am-boalohany KDE 4 dia hitako fa i Netrunner dia manome lanja betsaka ny lafiny "sosialy" sasany amin'ny tambajotra, tsy isalasalana fa mahaliana ho an'ny mpampiasa sasany fa tena be loatra ho ahy.
Andao hojerentsika raha toa ka gaga anao izahay amin'ny iray amin'ireo andro ireo, naoty momba ity rafitra fiasa ity ;-D
"Satria ny andraikitra lehibe dia rakotry ny fampiharana GTK."
Fanazavana mahatalanjona, hijerena raha milaza zavatra betsaka aminao ireo "mpamosavy" an'ny W $
antsipiriany sy ohatra.
Eny, nesorinao tamiko ny tsy fahalalako tamin'ny Linux. Niala nenina toy ny
eo amin'ny 9 volana eo ho eo hanandrana nefa tsy fantatro "na bitsika" ity SO Nandritra ny fiainako rehetra hatramin'ny nametrahako
ny rantsan-tànana amin'ny klavier dia nampiasa W $ aho satria io no napetraka, ary ny rantsantanana
Nianatra nampiasa azy aho ary «shit ...» goavambe ... ary namboarina ho
rakitra, rakitra, fotoana ary hadisoana mihitsy aza; Nianatra aho
hikirakira ny W $.
Fa izao ary miaraka amin'ny fanampian'ny google san sy ianareo izay tsy tia tena
fiaraha-miasa, efa nianatra zavatra betsaka aho ary efa mieritreritra ny tenako ho manana fahalalana tena lehibe ao
Linux hamela azy ho hany rafitra ao amin'ny solosainako manokana. Mbola amin'ny netbook
ny W $ avela ho an'ny an'ny asa, fa raha vantany vao manana fotoana aho a
Mint na Fuduntu dia hapetrako ianao.
Tao anatin'izay volana rehetra izay; Nanandrana ny habetsaky ny distro hitako mitady ilay idealy ary mieritreritra aho
fa hitako tany Netrunner ihany tamin'ny farany, nifandray tamin'ny derivatives of Arch aho ary
ny baiko ho azy ireo, zatra ny .deb sy apt-get aho hehehe 🙂 (fahaizana
an'ny W $, mitady ny fahatsoran'ny tsindry iray nefa tsy fantatra ny antony) Linux hanao
mampianatra ny mieritreritra fa tsy ho ondry iray amin'ny andiany indray.
Manantena aho fa maro amin'ireo izay mamaky ny lahatsoratra sy mampiasa ny vaovao hitany,
avelao ny tsy fankasitrahana ary manorata fanehoan-kevitra na farafaharatsiny Fisaorana
tsy mandany vola izany ary mahatonga anao ho tsara tarehy, miampy fanentanana ho an'ireo izay
nanoratra ity lahatsoratra ity, fantatrao fa tsy very maina ny fotoanao.
Misaotra an-tapitrisany amin'ny zavatra rehetra ataonao.
"Manantena aho fa maro amin'ireo izay mamaky ny lahatsoratra sy mampiasa ny vaovao hitany,
Misaotra an-tapitrisany amin'ny zavatra rehetra ataonao. »
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko, mazava ho azy fa misy ampahany lehibe amin'ny ego ary ilaina ny famoronana ny / ny mpamorona ny fampiharana tsirairay, ny lohahevitry ny sary masina, ny loko, na inona na inona.com, izay tsy midika hoe feno fankasitrahana mandrakizay ny iray noho izy afaka nampiditra an-dry zareo hoy ny rindrambaiko.
Eny, nanome PCLINUX monty sy mini - distro be aho, heveriko ho # 1 [ary efa nanandrana maro aho] nividy ilay DVD mihitsy aza aho [ireo kinova 2.] Tsy zatra mividy dvd an-tserasera azo antoka aho - fa ny kalitao tamin'ity OS ity dia naharesy lahatra ahy. Manakodia distro vato mafy io. Miala tsiny amin'ny spanglish. Andramo io !!
Lahatsoratra 25 be mpamaky indrindra tamin'ny 2012